I-China Gentamycin Sulfate kunye ne-analgin Injection Imveliso kunye neFektri | Iqela leqela leTypt
I-Gentamycin Sulfate 15000IU.
IGnramycin Sulfate In sindion isetyenziselwa ukunyanga iigram ezingalunganga kunye nezifo ezakhayo. I-Gentamycin isetyenziselwa ukunyanga inyumnyezi yesilwanyana kunye nesifo samathambo esibangelwa sisifo se-streptococcus. I-Gentamycin Sulfate iyasebenza kwityhefu yegazi, usulelo lwenkqubo yokuzala ye-uropoiesis, usulelo lomgudu wokuphefumla; usulelo lwamazinyo (kubandakanya i-peritonitis), usuleleko lwe-biliary trailer, mastitis kunye nolusu, usuleleko lwe-parenchyma olusuka kwizinto ezibuthathaka.
Ukuhlaziywa kudityaniswa nale ntsholongwane yokunciphisa iintlungu.
Ingulube: Unyango lwesifo sohudo, isifo sokuqaqamba kwamalungu omzimba, inyumoniya, isifo sokuqaqamba kwamathumbu, isifo sokuqaqamba kwamalungu omzimba, isifo seengcongconi, isifo se-atrophic rhinitis (AR) kunye nezifo ezahlukeneyo zebhakteriya.
Iinkomo: Unyango lwe-mastitis, i-endometritis, i-cystitis, i-nephritis, isifo seengcongconi, umkhuhlane wokuhambisa, isifo sengqondo (brucellosis), hemorrhagic septicemia, kunye nezifo ezahlukeneyo zebhakteriya.
Ukufuya inkukhu: kunyango lweCRD, CCRD, coryza yosulelayo, isifo sokungenwa yintsholongwane, i-coli -hudo, staphylococcosis, kunye nezifo ezahlukeneyo zebhakteriya.
Hypersensitivity to mothamycin.
Ulawulo kwizilwanyana ezinobunzima be-hepatic kunye / okanye umsebenzi wezintso.
Ulawulo olufanayo lwezinto ezinobungozi.
Ukusetyenziswa okuphezulu kunye nokuhlala ixesha elide kunokubangela i-neurotoxicity kunye nephrotoxicity.
Iinkomo: 4ml nge-100kg yomzimba onzima.
Inkukhu: 0,05mlkkk ubunzima bomzimba ngamnye.
Kwinyama: ngeentsuku ezingama-28
Ubisi: Iintsuku ezi-7
Edlulileyo: I-Streptomycin Sulphate kunye neProcaine Penicillin G eneVitamin Soluble Powder
Okulandelayo: ILincomycin kunye neSpectinomycin sindano 5% + 10%